ô.cc – နေအိမ်
. 1 နာရီ1 နေ့1 သီတင်းပတ်1 လ1 နှစ်
ô.ccသည်အမည်မဖော်ပြသော URL အတိုကောက် redirector ဖြစ်သည်။ သင်၏လင့်များကိုလွယ်လွယ်ကူကူလွှဲပြောင်းပါ၊ ၎င်းကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင် app နှင့်ပေါင်းစပ်ပါ။ မှတ်တမ်းများမရှိပါ၊ မှတ်တမ်းများမရှိပါ။ သင်၏ privacy သည်လုံခြုံသည်။
ကျွန်ုပ်၏ URL ကိုအမည်ဝှက်ပြီးအတိုကောက်လုပ်ရန်အဘယ်ကြောင့်လိုအပ်သနည်း။
ô.ccသည်သင်ပေးထားသောအချိတ်အဆက်များအားလုံးအတွက်အညွှန်း (dereferer) ကိုသုံးခြင်းဖြင့်သင်၏ privacy ကိုတိုးပွားစေသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်သင်၏ link များကိုတိုစေလိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့်အခြားမျှဝေသည့်ပလက်ဖောင်းများတွင်လွယ်ကူစွာမျှဝေနိုင်သည်။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင် url ကိုပြုပြင်ပြီးသက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်ကိုဖော်ပြနိုင်သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကသင် redirect လုပ်ချင်တဲ့ link ကိုသာသိမ်းထားလို့ urls တွေကိုအတိုကောက်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
dereferer ဆိုသည်မှာအသုံးပြုသူအားဝက်ဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုမှ URL ကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် web browser များသည်သင်အခြားစာမျက်နှာသို့ပြန်သွားစဉ်သတင်းအချက်အလက် (referr အပါအဝင်) ပေးပို့သည်။ မကျေနပ်သူ၏အခန်းကဏ္။ သည်ထိုအချက်အလက်များကိုလင့်ခ်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖုံးကွယ် / ဖယ်ရှားရန်ဖြစ်သည်။ ၀ က်ဘ်စီမံကွပ်ကဲသူတစ် ဦး သည်သူ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၏မှတ်တမ်းများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလိုပါကမူလ URL အစားအစားထိုးသူ၏ URL ကိုပြလိမ့်မည်။
1. ထည့်သွင်းရန်သင့် URL ကိုကူးထည့်ပါ။
2. စိတ်ကြိုက်အမည်ထည့်ပါ (optional) ။
သင်မျှဝေသုံးစွဲနိုင်သော URL အသစ်ကိုသင်ရလိမ့်မည်။
https //ô.cc/ကိုသာသုံးပါ။ သင်၏မူရင်း url ကိုထပ်ထည့်ပါ။
သင်၏ URL ကိုအမှန်တကယ်မြန်။ အမည်ဝှက်ပြီး၎င်းသည်အလွန်လွယ်ကူသည်။
- သင်အကြိုက်ဆုံးတွင်အောက်ပါ bookmarklet ကိုထည့်ပါ။
ရိုးရိုး mouse ကိုကလစ် နှိပ်၍ သွားသောအခါတိုတောင်းသော url ကိုအလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ bookmarklet ကိုသင်၏ toolbar ပေါ်သို့ဆွဲတင်ပါ။
ဘာကြောင့်မင်း link တွေကိုတိုပြီး anonymous လုပ်သင့်သလဲ။
URL အတိုကောက်ဝေါဟာရသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာကျွန်ုပ်တို့ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ရှိသည်။ ကျနော်တို့တောင်မှဖြစ်တည်မှုနားလည်သဘောပေါက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်အင်တာနက်ပေါ်မှာနေရာတိုင်းနီးပါးရှိတယ်။ အချိုရည်တိုတောင်းရခြင်း၏ပထမဆုံးအကြောင်းရင်းမှာအင်တာနက်ပေါ်မှထိုဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုရှာဖွေနေသူများအတွက်မှတ်မိရန်လွယ်ကူခြင်းဖြစ်သည်။ သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏လင့်ခ်တစ်ခုသို့မဟုတ် URL အတွက်သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိအကြောင်းအရာများကိုရည်ညွှန်းသည့် link တစ်ခုရှိသည်ဆိုပါစို့။ ၎င်းသည်အလွန်ကြီးမားပြီး၎င်းကိုနှုတ်ဖြင့်မပြောနိုင်ပါ။
https://example.com/5dc1apgeniune အားသင်၏ device ၏ clipboard ပေါ်တွင် link ကူးယူသောအခါသင်ထိုကဲ့သို့သော URL အမျိုးအစားကိုသင်တွေ့ခဲ့ဖူးသည်ဆိုပါစို့။ သင်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုမှတရား ၀ င်မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုမှ link ကိုပြောပြနိုင်စွမ်းမရှိကြောင်းသတိပြုမိပြီးဖြစ်သည်။
ဘယ်ဟာက link ၏လူသိရှင်ကြားအပေါ်စျေးကွက်၏ပထမ ဦး ဆုံးခြေလှမ်းကနေသင်တို့ကိုတားဆီးနေသည်။ ၎င်းသည် URL အတိုကောက်၏အခြေခံကျသောအကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်နှုတ်ဖြင့်ဖော်ရွေခြင်းနှင့်သင်အလွယ်တကူရိုက်ထည့်။ အလွယ်တကူဝေမျှနိုင်သောလင့်ခ်ကိုဖတ်ရှုရန်လွယ်ကူခြင်းအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ယူနီကုဒ်အရင်းအမြစ်ကို URL ကိုရုပ်ဝတ္ထုတစ်ခုအနေဖြင့်ကမ္ဘာ့အင်တာနက်ပေါ်ရှိသီးသန့်အကြောင်းအရာတစ်ခုအတွက် ဦး တည်ရာတစ်ခုအဖြစ်ခေါ်ကြသည်။
URL အတိုကောက်လုပ်ငန်းစဉ်သည် link တစ်ခုရှိအက္ခရာအရေအတွက်ကိုလျှော့ချနိုင်သော်လည်းအသုံးပြုသူများကိုထိုအကြောင်းအရာနှင့်တူညီသောလမ်းကြောင်းသို့ ဦး တည်နိုင်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်သည့်နည်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။
URL ရှေ့တွင်ကြီးမားသော URL တစ်ခုကိုသင်ရသောအခါ၎င်းသည်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလုံးကိုမှတ်မိရန်ခက်ခဲသည်။ ဤကိစ္စတွင် URL အတိုကောက်သည်သင့်အား URL ရှိအက္ခရာများကိုလျှော့ချရန်သင့်အားလုပ်ဆောင်ပေးသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်သင့်အားတူညီသောအကြောင်းအရာဆီသို့ ဦး တည်ခြင်းဆီသို့ရောက်အောင်ပို့ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်ရှေ့တွင် URL ကိုပိုမိုနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ဖွဲ့စည်းမှုတစ်ခုထားရှိမည် ဖြစ်၍ ၎င်းသည်မှတ်မိရန်လွယ်ကူပြီးစာရိုက်ခြင်းနှင့်ဝေမျှခြင်းတို့ပြုလုပ်ရန်လွယ်ကူလိမ့်မယ်။ URL အတိုကောက်မျက်နှာပြင်သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်များစွာသို့မဟုတ် web စာမျက်နှာများကို URL တစ်ခုတည်းနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်စွမ်းလည်းရှိသည်။
URL အတိုကောက်ရခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ၎င်းသည်အတော်အတန်သပ်ရပ်စွာကြည့်ခြင်း၊ ပိုမိုလွယ်ကူပြီးမည်သည့်အမှားမျိုးမှမပါဘဲတိုက်ရိုက်စာပို့ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများမှတဆင့်မျှဝေနိုင်သည်။ ၎င်းတွင်တည်နေရာနှင့်အချက်အလက်များကိုကာကွယ်ရန်နှင့်၎င်းအားအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောမည်သည့်အမျိုးအစားကိုမဆိုတိရိစ္ဆာန်များအဖြစ်ပြုလုပ်ရန်အတွက်လုံခြုံရေးအားသာချက်များရှိသည်။ URL အတိုကောက်အားဖြင့်လည်းအင်တာနက်ပေါ်တွင်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဖော်ရွေသောအကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
သင့်တွင်မတူညီသောလင့်ခ်များကိုမျှဝေမည့်မတူညီသော ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ကြော်ငြာကိုဖန်တီးသည့်ဘလော့ဂ်ဆိုဒ်ရှိသည်ဆိုပါစို့။ URL တိုတောင်းသောအားဖြင့်သင်တိုတိုနှင့် URL ဗားရှင်းများကိုအလွယ်တကူဖြည့်စွက်နိုင်ပြီးလူများသည်အကြောင်းအရာများကိုအလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်ပြီး Google Analytics တွင်အလွယ်တကူအဆင့်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
link များကိုမျှဝေရန်လွယ်ကူခြင်းကြောင့်အသုံးပြုသူများသည်စာလုံးပေါင်းနှင့်အလွယ်တကူဆက်သွယ်နိုင်ပြီး၎င်းတို့ကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာမှတ်မိစေနိုင်သည်။ URL အတိုကောက် ၀ န်ဆောင်မှုသည်သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်၏ဖောက်သည်များ၏ယုံကြည်မှုကိုလည်းကူညီနိုင်သည်။ အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ URL ကိုအတိုကောက်အားဖြင့်သင့်တွင်စာဖတ်သူနှင့်လွယ်ကူစွာဖတ်နိုင်သောဖော်ရွေသော URL ရှိခြင်းသည်အွန်လိုင်းပါ ၀ င်မှု၏စာဖတ်နိုင်မှုဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ စာကြည့်တိုက်ငယ်များသို့မဟုတ်စာပမြေားများနှင့်ပတ်သက်လျှင်သင်၏ link ကိုဖြစ်နိုင်သမျှဖောက်သည်များထံယုံကြည်စိတ်ချရလောက်အောင်ယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်သန့်ရှင်းအောင်လုပ်ရန်အခွင့်အရေးလည်းရနိုင်သည်။
အမည်ဝှက် URL အတိုကောက်
ဤ URL အမျိုးအစားသည်အခြေခံအားဖြင့်သင်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစစ်ဆေးခြင်းသို့မဟုတ်စစ်တမ်းကောက်ယူသူ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမမှတ်မိဘဲသင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုစစ်တမ်းကောက်ယူမှုဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခဲ့ဖူးသည်။ ထိုကဲ့သို့သော hyperlink အမျိုးအစားများကိုအီးမေးလ်များသို့သို့မဟုတ်သင့် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်၏ pop-up ၀ င်းဒိုးတွင်သို့မဟုတ်ဆင်းသက်သည့်စာမျက်နှာတွင်ပင်အလွယ်တကူကူးထည့်နိုင်သည်။ အမည်မဖော်လိုသော URL ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပိုင်ရှင်အားလုံခြုံစိတ်ချရသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်သက်ဆိုင်သော link ကိုထောက်ပံ့ပေးသောကြောင့်အသုံးပြုသူများသည်ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများကိုစစ်တမ်းကောက်ယူနိုင်ပြီး ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏အရည်အသွေးကိုအလွယ်တကူဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
အင်တာနက်၏ rmful contents တွေကို။ သငျသညျ pastinIgt iint tghree aetn tfiorre tlhionske opfe oypoluer wwheob sairtee wtiolwlairndgs taon yi ntsytpael lo fa npdr oUmRoL iroendailr eccotn tpernotm otthieonn ailt ciosn tveenrty ။ iesihtytyejncialcial .cialcial ။ ။ ။ ။ ။ ။ aid ။ ။ ။ ။ ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey အခြားတစ်ဖက်တွင်မူအမည်မသိ။ တိုတောင်းသောနှင့်အမှန်တကယ် URL ဗားရှင်းကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင့်အားသီးသန့်တည်ရှိမှုအလွှာကိုပေးလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်သင့်အားအကြောင်းအရာများကိုသိသိသာသာအတိုင်းအတာအထိကာကွယ်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
URL အတိုကောက်နည်းလမ်းများသည်အခြေခံအားဖြင့် http redirect လုပ်သည့်နည်းအတိုင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုဝဘ်လင့်ခ်သို့မဟုတ် IP လိပ်စာတစ်ခု၏အမည်မသိပုံစံကိုအတိုကောက်ပြုလုပ်ရာတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤနည်းလမ်းသည်ရှည်လျားသော URL ၏အက္ခရာအချို့ကိုအလွယ်တကူအတိုချုံးနိုင်သည်။ အစားထိုးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်တိုတောင်းအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ဗားရှင်းသည်ကမ္ဘာ့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏တူညီသောတည်နေရာကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
© 2022 ô.cc • All Rights Reservedဆက်သွယ်ရန်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ